बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ६ वटा मन्त्रालय पायो – Butwal 24 News
September 6, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on बुधबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले ६ वटा मन्त्रालय पायो
काठमाडौं, २१ भदौ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पर्सी (बुधबार) मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने भएका छन् । सरकार गठन भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत पूण्र्ता दिन नसकेको भनेर आलोचना भैरहेको थियो ।
तर, गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुसँग सहमतिमा प्रधानमन्त्री देउवाले यही बुधबार सरकारलाई पूणर्ता दिने भएका हुन् । मन्त्रालयको भागबण्डासमेत भैसकेको छ । कांग्रेसले ८ मन्त्रालय पाउने भएको छ भने नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले ६÷६ वटा मन्त्रालय पाउने भएका छन् ।
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सचिवालय सदस्य डा. विजय पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तार अब ढिलो नहुने बताए । उनले भने,‘भोलि सबै कुरा टुँगो लगाउने कार्यक्रम छ । यसबारेमा हामी भोलि फेरि बस्छौं । मलाई लाग्छ, पर्सी मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ ।’ पछिल्लो समय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच खटपट सुरु भएको भन्ने चर्चा थियो ।
भदौ २३ गते एमालेले संसद् चल्न नदिने !
काठमाडौं, २१ भदौ । नेकपा (एमाले) ले संसद् सञ्चालन गर्न नदिने तयारी गरेको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकालाई लिएर रुष्ट रहेको एमालेले अब बस्ने संसद् बैठक अवरुद्ध गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रति विद्यादेवी भण्डारीले भदौ २३ गते बुधबार ४ बजेको लागि संसद् अधिवेशन बोलाएकी छिन् । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले भने बैठक सहज रुपमा चल्न नदिने तयारी गरेको छ । त्यसको संकेत आज एमाले सांसद महेश बस्नेतको चेतावनीले देखाएको छ।
उनले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका २३ गतेको संसद् बैठकमा देखाईदिने चेतावनी दिएका छन् । उनले आज काठमाडौंमा आयोजित युवा संघको भेलालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । उनले सभामुख सापकोटाको भूमिका नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको कार्यकर्ताको जस्तो भएको भन्दै आलोचना गरे । उनले सभामुखले कुनै अमुक पार्टीको पक्ष लिएको पनि टिप्पणी गरे । खासगरी १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्न सिफारिश गर्दापनि सभामुखले सोहीअनुसार कारबाही अघि नबढाएको भन्दै एमाले रुष्ट बन्दै आएको छ ।